Beesha caalmaka oo baaq u dirtay Madaxda Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Beesha caalmaka oo baaq u dirtay Madaxda Soomaaliya
Beesha Caalamka ayaa Madaxda Soomaaliya ugu baaqday in shirka wada-tashiga ee dhawaan billaabanaya ay ka guul keenaan, tanaasul iyo hufnaanna muujiyaan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wakiillada Beesha Caalamka ee jooga Soomaaliya oo ka hadlay shir madaxeedka la filayo inuu dhawaan ka furmo Muqdisho ayaa sheegay in Madaxda Soomaalida looga baahan yahay in ay shirka ka qeyb galaan iyaga oo isku colool furan, si loo gaaro hishiis rasmi ah oo loo dhan yahay.
“Waxaan ku dhiirrigelinnay dhammaan hoggaamiyeyaasha Soomaaliyeed in ay si daacadnimo leh uga qeybgalaan Shirka Muqdisho ka dhacaya si dhakhso looga heshiiyo hirgelinta doorashada”. Ayaa lagu yiri war ka soo baxay UNSOM.
Waxa ay sheegeen in Bahda Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, ay la kulantay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble iyo Madaxda Maamulada Xubnaha ka ah Federaalka maalmihii la soo dhaafay, waxayna ku baaqeen in hoggaamiyaashu tanaasul muujiyaal si uu heshiisku u soo degdego.
“Tanaasul iyo is afgarad ayaa loo baahanyahay si Soomaaliya ay horay ugu sii socoto, Ra'iisul Wasaare Rooble iyo Madaxda kale ee Soomaaliyeed, waxa ay heystaan taageerada Qarammada Midoobay ee ku aaddan guuleysiga Shirka Wadatashiga Qaran Soomaalidu hoggaamineyso”. Ayaa sidoo kale lagu yiri warka ka soo baxay Beesha Caalamka.
Shirka Wada-tashiga qaran, ayaa hore loo qorsheeyay inuu furmo maanta oo ku beegan 20 May 2021, hayeeshee, madaxda Maamullada qaar oo ka maqan Muqdisho, ayaa sababi karta inuu dib ugu dhaco Sabtiga ama Axadda middood.